भारतमा ‘जनता कर्फ्यू’: कस्तो छ स्थिती ? – Sawal Nepal
भारतमा ‘जनता कर्फ्यू’: कस्तो छ स्थिती ?
एजेन्सी ९ चैत्र २०७६, आईतवार ०८:२८
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार देशवासीसँग ‘जनता कर्फ्यू’ का दिन बिहान ७ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन अपिल गरेका छन् । यतिबेला श्रीनगर र बेंगलुरुजस्ता शहरमा करफ्यू लागेको जस्तो स्थिती हुनेछ । प्रशासनले पनि यस्तै बयान दिएको छ । कश्मीरमा हिंस्रक घटनाको इतिहास भएकोले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, बेंगलुरु पुलिसले अनावश्यक रुपमा घरबाट बाहिर निस्कनेलाई कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । यद्यपी, दिल्ली पुलिसले कुनै प्रकारको कठोर कदम नलिइने र कुनै जरिवाना पनि नतोकिएको जानकारी दिएको छ ।
दिल्ली पुलिसको कोरोना ट्वीट – ‘राहों मे उनसे मुलाकात हो गई